Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips In Eoropa
Dia nandray ny fiaran-dalamby dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra mahatsapa Eoropa Toerana mahafinaritra indrindra faritra. Ankafizo mahatalanjona tendrombohitra, farihy, ny endriky ny renirano sy ny tsy mampino lalitra ny injeniera - Ireo no Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips any Eoropa.
West Highland Line Toerana mahafinaritra Train Trips, Scotland
Ny sambo rehetra Hogwarts Express! Ny ankamaroan'ireo 264km lavitra amin'ny lalana iray izay manome topimaso ny manaitra hivadika, lochs, ny sasany amin'ireo-peo lavitra indrindra any Grande-Bretagne, ary - nampiany ny tsipika ny Harry Potter majika - ny Glenfinnan viaduct ampiasain'ny Hogwarts Express.
Route: Paris ny Nice
Cue tanimanga-kapila tanimanga-roofed tanàna, milamina tanim-boaloboka, ary ny rano manga tsara tarehy!
A lisitry ny Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips any Eoropa dia tsy ho tanteraka raha tsy misy ny South-de-France. Zava-malaza noho ny hatsaran-tarehiny, noho izany dia tsy mahagaga izany nataony amin'ny lisitra. Nanomboka tamin'ny Paris, ianao ao amin'ny voana tanamasoandro eran'ny sy lavender saha ny Provence adiny roa monja taty aoriana. Ataovy azo antoka ianao entana ny akanjo, 'Mahatonga ny Frantsay Riviera dia tsy zavatra tianao handeha tany Summer.
Toerana mahafinaritra Rhin Valley Train Trips, Alemaina
Araho ny miolakolaka ny Reniranon'i Rhin araka ny mahatonga ny lalana avy Koblenz ho Mainz. Izany ihany amby dimam-polo minitra mitaingina, fa teny an-dalana, hahita trano fiarovana ary ny tanim-boaloboka nihazona tamin'ny renirano ny tehezan-tendrombohitra. Tena Tahaka zavatra avy amin'ny Fairytale!
Vienna ho Koblenz Lamasinina
sakafo maraina in Munich ary ny sakafo hariva any Venice
3 firenena, 3 X ny hevitra. Hitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby avy any Munich ny Venice ary mahazo hisotroana 3 firenena mendrika ny mahatalanjona hevitra. Izany tsipika mikoriana amin'ny alalan'ny sasany amin'ireo tendrombohitra tsara tarehy indrindra, renirano, ary ny tanàna any Alpine Aotrisy, Alemaina, ary Italia. 3-in1 ny The Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips any Eoropa.
Munich any Venice Lamasinina
Raha tadiavinao zavatra izany tsy toy ny be olona sy ny maro hafa eo amin'ny lafiny bibidia, dia io no diany ho anao. Manomboka amin'ny haavon'ny ranomasina, ny manerinerina fjordland haingana manome fomba hantsam-bato mideza tarehiny sy ny kijana maitso mavana. Aza adino ny entana tongotra lavitra kiraro, satria ny fiaran-dalamby mijanona amin'ny toerana maro tongotra lavitra lalana.
Ny farany amin'ity lahatsoratra ity ny Toerana mahafinaritra Train Trips any Eoropa dia, Niakatra ny Glacier Express!
St. Moritz ho Zermatt. 8 Toerana mahafinaritra madio ora ny fahasambarana. Izany dia midika hoe tsy hoe ny Glacier Express fa na inona na inona. Travel ny alalan 'ny tontolo toy izany ny Eoropeanina fa masina ny lalamby (miaraka amin'ny Bernina) dia UNESCO World Heritage Site; fa an-trano ihany koa ny iavian'ny Rhône-mahery sy Rhin Rivers.
Koa ankehitriny fa atao mamaky, vonona ve ianao mba hahatonga ny ny fiaran-dalamby Toerana mahafinaritra fitsangatsanganana any Eoropa, ao amin'ny Save A Train manana ny tsara indrindra fiaran-dalamby Travel tapakila, amin'ny tahan'ny mora indrindra, ary maro ny safidy fandoavam-bola.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-train-trips-europe%2F%0A%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Toerana mahafinaritra #View #Europe longtrainjourneys Train Travel